Somaliland oo gacanta u gelisay Itoobiya saraakiil horey ula tirsana Xukuumaddi Mingiste qaxootina ku ahaa Hargeysa. | Horn of Africa Observer
Somaliland oo gacanta u gelisay Itoobiya saraakiil horey ula tirsana Xukuumaddi Mingiste qaxootina ku ahaa Hargeysa.
Posted on December 30, 2011 by Moment Media Group
Xukuumada Siilaanyo ayaa shalay ka musaafurisay magaalada hargeysa qaxooti kasoo jeeda dalka Itoobiya kuwaasi oo 20 kii sano ee ugu danbeeyey ku noolaa halkaasi. Waxaana gacanta ay u gelisay xukuumada Itoobiya.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo saxaafada kala hadlayey dadkaasi ay u gudbiyeen itoobiya ayaa sheegay inaysan aheyn dadkaasi qaxooti balse ay ahaayeen kuwa rabshado kawaday afaafka hore ee xafiiska UNHCR ee ku leedahay magaala madaxda Hargeysa.
” Dadka aan musaafurinay ma ahayn qaxooti ee wa kuwa dhib ku waday amaanka dalkeedan. Sababtoo ah waxaa ay ka deyn waayeen xafiiska UNHCR mudaaharaad wax ay ku sheegeen oo ahaa fowdo amaanka ka dhan ah. Waxaan u sarnay saraakiil ka tirsan wasaaradeena waxaana ay ka diideen inay joojiyaan dhibka ay wadaan,Sidaasi ayaana ugu celinay dalkooda” ayuu yiri wasiirka ariimaha gudaha Somaliland.
Dhinaca kale qareenka u doodayey qaxootiga la celiyey oo lagu magacaabo Abdisanir Maxamed Shire ayaa isagana dhankiisa sheegay inay xukuumada ku deg degtay celinta dadkaasi,isagoona intaasi raaciyey inay iskudaygii ay ku joojin lahaayeen howshaasi uguna doodi lahaayeen qaxootigaasi loo xiray iyaga xitaa. waa sida uu hadalka u dhigaye.
Qaxootiga la celiyey waxaa ku jiray xubno horey ula soo shaqeeyey xukuumadii Mingiste kuwaasi oo qaxootinimo ku joogay Somaliland,iyaddoo gacan u gelintooda Itoobiya ay ku noqon doonto mid dhib uu kasoo gaaro xukuumadii ay horey uga soo baxsadeen. waa sida ay sheegayeen xubnaha u dooda xuquuqda aadanaha ee ku sugan magaalada Hargeysa.
Ilaalinta shuruucda qaxootiga uga soo baxa dalkooda arrimaha siyaasada ayaa waxaa ay ka hor’imaan doontaa musaafurinta xukuumada Somaliland kula kacday qaxootiga kasoo jeeday dalka Itoobiya,iyaddoo xukuumada Somaliland ay arrintaasi iska fogeysay oo ay sheegtay inaysan dadkaasi aheyn qaxooti dhowraya sharciga u yaal dalkeeda.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay Somaliland musaafuriso qaxootiga dalkeeda jooga,waxaa horey loo xasuustaa inay xitaa musaafuriyeen soomalida u dhalatay gobollada koonfureed ee dalka Somaaliya kuwaasi oo xitaa gaarigi waday kula rugmaday duleedka magaalada Laascaanood.